Ny alakamisy 22 septambra lasa teo tamin’ny 12 ora sy sasany antoandro, tao Analavelo ao amin’ny fokontanin’i Vohimasina, 8 km tsy hahatongavana ao Farafangana no nitragan’izany. Fahavakisan’ny kodiarana roa tao aoriana no voalaza ho nampivadika ilay kamiao, ka nahatonga ity lozam-piarakodia niteraka fahafatesan’olona marobe ity. Nisy 52 koa ny isan’ny naratra ka tsy naharaka ny mpitsabo sy mpandidy tao amin’ny hopitaly, ao Farafangana, fa voatery niantso vonjy tamin’ny mpitsabo any Antsirabe sy Ambositra.
Nipetraka teny an-dalantsara
Tery dia tery ny hopitaly ao Farafangana teo anatrehan’ny habetsahan’ireo naratra, izay natsaboina ka misy napetraka hatreny an-dalantsara, hoy ny vaovao napitain’ny eny anivon’ny Zandarimaria. Araka ny re avy any an-toeranaindray dia voalaza fa olona sendra nanakana teny an-dalana ny ankalaroan’ireto.
Voararan’ny lalana mifehy ny fifamovoizanana ny fitondrana olona amin’ny kamiao, kanefa noho ny tsy fahampian’ny fitaterana amin’ny toerana saro-dalana sy tsy ahitana fiara firy mivezivezy toy ireny dia ikipiana ihany izany matetika. Ny hitrangan’ny loza toy izao no sorohin’ny lalàna.